Fa Maninona i Madagasikara no Tsy Afa-Mametraka Datim-Pifidianana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jolay 2013 18:30 GMT
Iray amin'ny dingana lehibe voasoratra ao amin'ny tondrozotra [fr], fifanarahana nosoniavin'ny mpitondra ny tetezamita sy ny telo amin'ny antoko mpanohitra efatra eto amin'ny firenena izay manoritra ny lala-kivoahana amin'ny krizy ny fanantanterahana fifidianana malalaka sy mangarahara. Nefa ny datim-pifidianana filoham-pirenena nahemotra amin'ny fotoana manaraka [mg] mbola betsaka kokoa noho ny sidi-piaramanidina mampitohy ny seranam-piaramanidin'i Newark sy Cincinnati.
Tafahitsoka tao anaty krizy hatry ny ela ny firenena ka mahatonga ny mpanara-maso hanontany hoe haharitra hafiriana ny fitondrana tetezamita ankehitriny no hijoro mialoha ny handraisan'ny fitondrana voafidy ny asany. Ho fanombohana, mikorontana tanteraka ny firafitra politika ka nahatonga ny praiminisitra nanambara fa raha ny heviny, dia tsy misy mpitondra fanjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao.
Fa inona no mampananga-tanana aloha ?
Tamin'ny fotoana farany nametrahana ny firotsaha-kofidiana amin'ny fifidianana, dia 49 ny isan'ny kandidà filoham-pirenena nambara [mg]. Noho ny fanemorana ny datim-pifidianana avy amin'ny volana mey mankany amin'ny volana jolay ka afindra amin'ny fotoana hafa mbola ho faritana amin'ity taona 2013 ity, efa nisy sahady kandidà vitsivitsy nitsoaka an-daharana raha misy telo hafa nangatahan'ny vondrona mpanelanelana iraisampirenena (GIC-M) hanala ny anarany mba hampifanarahana ny raharaha amin'ny tanjon'ny tondrozotra.
Ireo mpanao politika teloheverin'ny GIC-M ho tsy azo ekena ny firotsahany hofidiana dia ny filohan'ny tetezamita ankehitriny, Andry Rajoelina; ny filoha efa nitondra in-droa an'i Madagasikara Didier Ratsiraka, izay efa nanompo ny firenena tamin'ny 1975 ka hatramin'ny 1993 sy nanomboka ny 1997 ka hatramin'ny 2002; ary i Lalao Ravalomanana, vadin'ny filoha voaongana Marc Ravalomanana.
Ny solontenan'ny Vondrona Afrikana Ouedraogo manazava amin'ny vondron'ny mpanelanelana ny fijeriny mifandrindra amin'ny fanajana ny fifidianan'ny Malagasy [fr]:
Marina fa tsy manaja manontolo ny ara-dalàna ireo firotsaha-kofidiana ireo, saingy efa efa-taona izay ny krizy niainan'ny Malagasy, ka aleo tadiaviny ny vahaolana. Ary ny vahaolana, isika, isika milaza fa be dia be ny kandidà, betsaka satria miisa 41 ny kandidà, ka aleo ny Malagasy no tompon'andraikitra, aleo omena fitokisana, fa ry zareo ihany no hanao ny safidiny.
Saingy tsy misy hivonona ny hiala ireo kandidà telo ireo. Hita ho nanao fampielezan-kevitra tany andrefan'i Madagasikara i Rajoelina amin'ity sary eto ambany ity izay miafina ao ambadiky ny lanonam-panjakana hanatrika izany (Raha ny ofisialy dia tsy misy ny fampielezan-kevitra rehefa tsy mipetraka ny daty):
Rajoelina manao fampielezan-kevitra any Mahajanga, Madagasikara, Jolay 2013. Sary navoakan'i Patrick Raharimanana ao amin'ny Facebook nahazoana alalana.
Lalao Ravalomanana nanambara tao amin'ny Wall Street Journal fa:
Mirotsaka ho filoha aho, tsy misy zava-nitranga tao ho ao hanova ny hevitro. Vonona hizaka ny sazy manokana noho ny finoako aho [..] Ny zavatra tadiavin'ny olompirenena malagasy rehetra dia ny daty ifanarahana hanaovana fifidianana; tsy ampiana, tsy analana. Aorian'izay dia ny vahoaka no manapa-kevitra izay tiany ho filoha manaraka. Tokony avela hanolotra ny vinavinan'asany avokoa ny kandidà rehetra miisa 41.
Ny ambin'ny kandidà, kosa, mandrisika ny fiarahamonim-pirenena malagasy hihetsika sy hanao izay rehetra eo amin'ny fahefany mba hametrahana ny datim-pifidianana indray mandeha sy ho an'ny rehetra. Amin'izany dia nisy fanangona-tsonia navoaka [fr] sy nosoniavin'ny kandidà 21 amin'ny 41 tavela.
I Etazonia ihany koa dia nanambara fa miròna amin'ny fifidianana mampiditra ny kandidà rehetra miisa 41 tanterahina min'ity taona ity ry zareo [fr].
Iza no mahazo tombontsoa amin'ny fanemorana? Ary iza no voa mafy?
Araka ny efa voalaza tany ambonimbony tany, dia manontany tena ny mpanara-maso maro hoe haharitra hafiriana ny fitondrana tetezamita ary ahoana ny fomba hanakatonana ny krizy. Ny azo avoitra dia tsy vonona ny hamotsotra ny fahefana ny eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana, araka izay hita amin'ny fampielezan-kevitra ezahin-dRajoelina. Arakaraky ny tsy isian'ny fiovana no itoeran-dry zareo maharitra eo amin'ny toerany.
Zafy Albert, filoha teo aloha, nanambara fa iray amin'ny sakana fototra ny tafika [fr], ny andry mitana ny toerana voalohany nanampy ny fitondrana ankehitriny hitana ny fahefana :
Nanamafy i Zafy fa ny Tafika no sakana amin'ny fifampiraharahana mandeha amin'izao fotoana.
Mivandravandra ihany ny antony mbola ifikirana maharitra kokoa rehefa nivoaka fampahafantarana an-tsarisary nataon'ny sampan-draharaha OMNIS, sampan-draharaha tantanin'ny fanjakana izay nomena andraikitra handrindra, hampandroso ary hampiroborobo ny loharanon-karena ankibon'ny tany eto Madagasikara:
Loharanon-karena voajanaharin'i Madagasikara sy ireo orinasa mifaninan hahazo azy ireo. Fira navoakan'ny OMNIS ao amin'ny Facebook, nahazoana alalana
Ny sarintany dia mandahatra ny toerana misy harena ankibon'ny tany rehetra eto Madagasikara sy ireo orinasa iraisampirenena izay nanasonia fifanarahana hitrandraka ny harena an-kibon'ny tany ato amin'ny zaratany. Ny tsy fisian'ny mangarahara amin'izay votoatin'ireny fifanarahana ireny no manakana ny olompirenena malagasy tsy hahalala izay tena voasoratra tokoa anaty fifanarahana sy izay mahazo tombontsoa amin'izy ireny. Antony hafa ifikirana mafy amin'ny fahefana ihany koa ny mbola fandehanan'ny bizina ahazoam-bolan'ny fanondranana andramena.
Raha mahazo tombontsoa amin'ny fiitaran'ny tetezamita ny vitsy an'isa, niteraka fahavoazana goavana eo amin'ny olona amin'ny ankapobeny kosa iany. Fanadihadiana vao haingana no nampiseho fa nanaloka krizy ara-piarahamonina sy ara-toekarena mamoha fady ny krizy ara-politika: raha efa iray amin'ny firenena mihazakazaka indrindra ho amin'ny fahantrana i Madagasikara, sivy amin'ny Malagasy folo ankehitriny no mivelona ambanin'ny roa dolara isan'andro. Ny tahirin-kevitra no mampiseho fa niampy efatra tapitrisa ny isan'ny mahantra hatramin'ny 2009 [fr].
Ny lahatsary manaraka avy amin'i Eric Rabemanoro no mamelabelatra ny fiantraikan'ny krizy eo amin'ny tsy fisian'asa, fahefa-mividy ary ny heloka bevava [fr] :
Ny fivoahana amin'ny krizy amin'izao toe-javatra izao dia tsy mijanona intsony amin'ny resaka politika, fa lasa fiavota-tena mba tsy ho faty ho an'ny ankamaroan'ny mponina. Ny fanontaniana avandravandra dia hoe aiza marina moa ny laharam-pahamehana ho an'ny sangany eo amin'ny politik sy ny fiarahamonina iraisampirenena.
Soratra miverina: "Madagascar, silence on coule" – A qui profite le crime | Désobéissante Civile, Moi Pas Bouger d'Internet
[…] Extrait de l’article publié sur Global Voices en anglais, français et en malgache […]
17 Jolay 2013, 13:24
Soratra miverina: "Madagascar, silence on coule" – A qui profite le crime – Madagascar no longer an evolutionary hotspot | Désobéissante Civile, Moi Pas Bouger d'Internet
17 Jolay 2013, 13:36